Izindaba - Sithola isitifiketi sokuhlolwa kwabahlinzeki ngegolide i-Gold Plus Supplier
Sithola isitifiketi sokuhlola somhlinzeki ngegolide seGold Plus
ngomhla ka-29 Okthoba, 2020
Ekuqaleni kukaNovemba, 2020, u-Hebei Lanwei Imp. & Exp.Co., Ltd wajoyina umphakeli oqinisekisiwe owethulwe ngu-Alibaba
Umhlinzeki wegolide kanye nomhlinzeki osezingeni eliphakeme oqinisekiswe amandla anegunya le-Alibaba Platform. Ngokuhlanganiswa kwe-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, ipulatifomu yenza ukuqinisekiswa, ukuqinisekiswa nokudluliswa kwamandla omthengisi wonke, njengeziqu zebhizinisi, iziqu zezimpahla kanye namandla ebhizinisi.Ngaphezu kwezinsizakalo zamalungu aphumayo, amalungu kaJinping-Cheng Ibhizinisi futhi lijabulela amalungelo akhethekile wokumaketha, izigcawu zangaphambili ezikhethekile namalungelo amathuluzi acebile.
Kusukela ngoJulayi 1, 2018, iJinping-Cheng Enterprise isibe yikhasimende eliyinkanyezi elikhethekile, futhi abahlinzeki baseChina kuphela abanesilinganiso senkanyezi yomthengisi senkanyezi engu-1 noma ngaphezulu abafanele ukuthenga. Amakhasimende ezinga le-Star athenga amabhizinisi e-Jinping-Cheng azojabulela okulandelayo 8 amalungelo nezintshisekelo:
1.Ubunikazi bamandla: uhlangothi lomthengi lokudlulisela amandla okuxhumanisa okugcwele, ubunikazi bamakhasimende ezinkanyezi shazi
2. Isitolo Esithandwayo Esikhethekile seJinpin-Cheng Enterprise: ikhasi lasekhaya lesitolo esithandwayo esinezinga eliphakeme lokuhlonza, isivivinyo samahhala sesifanekiso sasesitolo esithandwayo esisemthethweni, ukubonisa okuningana kokuboniswa kolwazi lwesigaba, ukuthuthukisa isipiliyoni sokuthenga sabathengi
3.Ukuhlolwa okugcwele kwefektri yesehlakalo: kugunyazwe yinkampani egunyaziwe, ukuboniswa kwesigcawu sangempela, ukucwilisa, ukuthembela kuphindaphindiwe
4. Izinzuzo zama-akhawunti amancane: Ukuphathwa kwe-akhawunti yesikhulumi kuzothuthukiswa, futhi izinzuzo ezengeziwe zama-akhawunti amancane ama-5 zizonikezwa
5. Ukudlala umdlalo kwemboni: Izimo ezifanayo ziyathandwa endaweni yomcimbi wesayithi
6. Ilungelo lokumaketha: Ilungelo elilodwa lokuthenga imikhiqizo yokukhangisa ekhethekile ye-Exhibition yedayimane
7. Uhlobo lwebhizinisi lomphathi wedatha: amandla e-data abunjiwe, amandla wedatha, zazi wena, yazi imboni, wazi izimbangi
8. I-Enterprise Pass Pass: ukuhlanganiswa kwemininingwane yamakhasimende amaningi esitolo, ukuphathwa kwamakhasimende okunempilo, ukulandelwa okunembe kakhudlwana
Manje yisikhathi semininingwane emikhulu, ikakhulukazi ezinkampanini ze-e-commerce, ezidinga ukwesekwa kwedatha enkulu, ukuhweba ngomngcele we-e-commerce akuyona into ehlukile.Siyathuthuka njalo futhi siyathuthuka, sizosebenzela amakhasimende ngobuchwepheshe obuthe xaxa